Mandalas🥇 Gali oo ku raaxee Mandalas.wiki
Mandalas Waa naqshado soo jiita dad badan runtiina faa iido u leh maskaxda. Ugu horreyntii, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado abuurista sawirrada qaabka goobaabintu waa wax aad u da 'weyn.
Diiwaanada ugu horreeya ee mandalas waxay ka bilaabmaysaa qarnigii XNUMXaad, gobolka Tibet. Ku faafin sidoo kale dhowr dal oo kale oo Bariga ah, sida Hindiya, Shiinaha iyo xitaa Japan Meelaha oo dhan ereyga mandala waa a hadal ka soo jeeda Sanskrit , oo macnaheedu yahay goobaabin. Waxaa guud ahaan loo adeegsadaa cibaadooyinka diinta ama qaab u fiirsasho inta lagu jiro fekerka.
Maqaalkan waxaad ku baran doontaa wax badan oo ku saabsan taariikhda farshaxanimadan qadiimiga ah ee illaa maanta socota oo aad ku ogaan doontid faa'iidooyinka ay u leeyihiin jidhka iyo maskaxda. Sidoo kale maxaa yeelay waa wax caadi ah in la helo buugaag waayo, midabaynta iyo xaragada oo matalaya noocyada kala duwan ee mandala.
Waa maxay mandalas?
Mandala waa eray ka yimid luqadda Sanskrit, oo loo arko inuu yahay luqad dhimatay oo macnaheedu yahay goobaabin. Si kastaba ha noqotee, xitaa maanta, Sanskrit waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah 23 luqadood ee rasmiga ah ee Hindiya, muhiimadda ay u leedahay Hinduuga iyo Budhiism-ka.
Sidaa darteed, mandalas waa naqshado qaabab joomatari urursan . Taasi waa, inay ka soo baxaan isla xaruntii. Laga soo bilaabo bilowgii, sawirada ayaa loo yaqaan sidee , oo ah eray ka soo jeeda luqadaha looga hadlo gacanka Hindustani qalab ahaan. Taasi waa, mandalas iyagu waa habab lagu gaaro himilo cayiman mana aha himilada lafteeda.
Ujeeddadan ujeeddada laga leeyahay ayaa is beddeleysa iyadoo loo eegayo mid walba dhaqamada laga arko. Intooda badan, mandalas waxay u adeegaan nooc ka mid ah feejignaanta fikirka. Ka mid ahaanshaha kaliya foomamka, laakiin dhismaha sawirka muhiimadda ugu weyn.
Qaababka waxaa lagu abuuri karaa qalab kala duwan, laakiin had iyo jeer waa midabo badan. Habka ugu caansan ee loo abuuro mandalas waa iyada oo loo maro midabyo midabyo leh warqad ama shiraac. Si kastaba ha noqotee, macbudyada Buddhist qaarkood waxay ilaaliyaan dhaqanka samaynta mandalas bir ama alwaax.
Waxaa jira qaab kale oo lagu abuuro mandalas xitaa ka sii khaas ah, taas oo ay sameeyaan wadaadada Buddhist ee qaar ka mid ah macbudyada adduunka. Macbudyadan dhexdooda, suufiyadu waxay ku darseen farshaxanka abuurista mandalas ciid midab leh inta lagu guda jiro sano. Sawir-qaadiddu waxay qaadan kartaa saacado ama maalmo si loo dhammaystiro, markii sawirku dhammaado isla markiiba waa la burburiyaa. Kaliya markaa ayaa alaabada la isticmaalay lagu daadiyaa webi. Farshaxankani wuxuu u adeegaa inuu metelo in wax kasta oo nolosha ka mid ahi ay yihiin ku-meel-gaadh.
Halkee iyo goorma ayaa la abuuray?
Diiwaanada ugu horreeya ee abuurista mandalas waxay taariikhdeeda dib ugu noqdeen Qarnigii XNUMXaad, gobolka ay ku taal Tibet . Bilowgii, sawirro ayaa loo adeegsaday diinta Buddhist oo ah nooc ka mid ah feejignaan iyo caawimaad xagga fikirka ah.
Isla muddadaas mandalas ayaa sidoo kale laga helay gobollada Hindiya, Shiinaha iyo markii dambe Japan, sida oo kale, kaliya maahan Buddhism, laakiin sidoo kale Hinduuga iyo xitaa Taoism, halkaas oo astaamaha yin iyo yang loo arko mandala .
Si kastaba ha noqotee, diimaha oo dhan waxay ula dhaqmaan sawirrada sidii wax muqaddas ah , taas oo inta badan u taagan wareegga nolosha. Dhinacyada Buddhism-ka qaarkood, mandalas waxaa loo metelay sidii daarihii ilaahyada oo sidaas darteed waa muqaddas.
Si kastaba ha noqotee, inkasta oo diiwaannada rasmiga ah ee ugu horreeyay ay ka yimaadeen Bariga, haddana waxaa la ogaaday in dadka asalka u ah qaaradda Ameerika ay sidoo kale adeegsadeen qaabab joomatari urursan. Gaar ahaan cibaadooyinka la xiriira bogsashada. Intii u dhaxaysay qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad, kaniisaddu waxay bilawday inay adeegsato sawirro farshaxanimo muqadas ah iyo galaas wasakhaysan gudaha importantes dhismayaasha .
Isla muddadaas, fikirka alchemy wuxuu ku faafay, halkaas oo boqolaal saynisyahanno ah ay baranayeen siyaabo lagu beddelo qalabka. Mandalas sidoo kale waa lagu soo daray tan, maadaama sawiradu ay ka muuqdaan dhowr qoraalo hermetic ah oo waqtigaas la qoray. Sidaa darteed, waxaa la ogyahay in bini-aadamku had iyo jeer lahaa xiiso gaar ah habka loo sawiro, taas oo socota illaa maanta.
Waa maxay macnaha?
Sidaan horeyba u sheegnay, tarjumaadda suugaaneed ee erayga mandala ee afka Sanskrit waa a goobaabin. Wareegaan waxaa loo isticmaali jiray qarniyo sidii matalaada marinka nolosha ama xataa daaraha waaweyn ee ilaahyada in la maamuuso. Si kastaba ha noqotee, tani way ku kala duwanaan kartaa dhaqan ilaa dhaqan.
Tusaale ahaan, mandalaska Hindida waxaa loo adeegsadaa in lagu matalo nolosha iyadoo loo eegayo naqshadaha caalamka. Halkan, waxay u taagan yihiin is-dhexgal iyo wada noolaansho wax kasta oo loo baahan yahay in la qabto.
Buddhism-ka, way ku xoogan yihiin qalabka fikirka maaddaama ay leeyihiin awood ay ku soo jiitaan dareenka qaababkooda iyo midabbada. Diinta wali waxaa loo isticmaali karaa inay matalaan gaabnaanta nolosha, marka lagu diyaariyo ciid iyo guryaha ilaahyada.
Dhaqanka Taoist, falsafada yin yang waxay isticmaashaa matalaadeeda u gaarka ah mandala. Halkan, midowga labada astaamood wuxuu sameysmaa guud ahaan wuxuuna matalaa dheelitirka ay tahay in lagu ilaaliyo dhammaan dhinacyada nolosha. Si kastaba ha noqotee, magaalooyinkii gumaysiga ka hor, si kastaba ha noqotee, waxaa jira astaamo muujinaya in sawirada loo adeegsaday xafladaha bogsiinta.
Waa maxay noocyada mandala ee jira?
Sidaan horeyba u soo sheegnay, qalab kala duwan ayaa loo isticmaali karaa dhismaha mandalas. Sidan oo kale, mid kastaa wuxuu u taagan yahay wax ka duwan, sida caafimaadka qofka ama ladnaantiisa, markii hadiyad loogu talagalay qof. Halkan ka eeg noocyada waaweyn ee mandalas iyo waxa loogu talagalay.
Mandalas Sand waa dhaqan ka dhexjira suufiyada Tibet. Farshaxankan, sawirada waxaa lagu sameeyaa dhulka oo leh ciid midab leh waana wax dhaqan u ah dhaqanka Buddhist.
Kahor intaadan bilaabin abuurista mandalas, suufiyadu waxay barteen farsamooyinka sanado badan waxayna ka fikiraan maalmo kahor si ay isugu diyaariyaan. Shaqadu badanaa waxay qaadataa saacado in la diyaariyo aakhirkiina wax walba waxaa lagu tuuraa webiga ama ilo kale oo biyo socda ah.
Fikradda waa in la matalo gaabnaanta dhammaan dhinacyada nolosha , maxaa yeelay dhammaantood waxay ku dhammaan doonaan saacad gudaheed. Dareenkaan, waxay sidoo kale matalayaan wax cusub bilow maadaama had iyo jeer ay suurtagal tahay in la abuuro naqshad ciid cusub.
Mandala alwaax ah
Tusaalaha kale ee dhaqanka Buddhist waa mandalas lagu sameeyay waxyaabo ay ka mid yihiin alwaax ama bir. Halkan waxay ku qaadan karaan qaabab saddex-geesood ah guud ahaanna waxaa loo isticmaalaa sidii matalaada guriga ilaaha qaar.
Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa hadiyado ahaan. Dareenkan, geeddi-socodka waxaa lagu xukumaa dhaqamo iyo dhaqanno kala duwan, taas oo macnaheedu yahay niyad-wanaag, maaddaama ay wanaagsan tahay in la helo mandala hadiyad qof ka timid.
Dhaqanka Hinduuga waa wax caadi ah in laga helo mandalas rinjiyeysan macbudyo kala duwan iyo meelo kale oo quduus ah. Midabyo dhalaalaya ayaa loo adeegsadaa farsamooyinkan, kuwaas oo inta badan ah matalaan kala duwan chakras ee jirka aadanaha Dhaqanka Hinduuga waxay la mid yihiin xarumaha tamarta, kuwaas oo ku faafay jirka aadanaha.
Sidan oo kale, midabka midabada loo isticmaalo sawirada waxay noqon doontaa hab lagu saxo chakraskan loona ogolaado wareegga wanaagsan ee tamarta. Markaa waxaan dammaanad ka qaadayaa horumarinta nolosha ruuxiga ah iyo tan jireedba.
Sidee loo sawiraa mandala guriga? 🤓
Suufiyadu waxay baranayaan sanado si ay u abuuraan mandalas midab leh. Si kastaba ha noqotee, laylis yar ayaa suurtagal ah in la dhuuqo faa'iidooyinka farshaxankan, iyada oo aan shaqo badani jirin. Si tan loo sameeyo, waxaad sawiri kartaa qaababkaaga adoo raacaya talooyin fudud iyo xitaa fiidiyowyo YouTube ah.
Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad ku sawirto goobaabin xaashi xaashi ah, maadaama mandala macnaheedu yahay "goobaab". Waa inaad ka taxaddartaa inuu sawirku u fiicanyahay sida ugu macquulsan ', taas waxaad u isticmaali kartaa a jiheeyaha ama saxan. Kaliya markaa ayaa suurtagal noqon doonta in la helo natiijo wanaagsan oo kama dambaysta ah.
Raadiyay wareegga, waxaad u baahan tahay inaad raadiso dhexda oo aad xariiqdid xariijin. Ka dibna sawir xariiq kale oo toosan oo sii wad tan illaa aad ka heshid wax kugu filan. Kani waa tusaalaha aasaasiga ah ee dhammaan mandalada aad rabto inaad abuurto. Halkaas, kaliya isticmaal fikirkaaga oo ku dar qaansooyin, ubaxyo, qaabab joomatari, iyo xitaa ereyo.
Laakiin xusuusnow, waa inay micno shaqsiyadeed kuu leeyihiin adiga waana inaad gabi ahaanba u hurtaa wax soo saarkaas. Marka sawirku dhammaado, si fudud ugu midabee, adigoo isticmaalaya midabbo dhalaalaya, oo firfircoon.
Mandalas midabaynta ☸️
Mandalas waxay noqotay mid caalami ah. Sidaa darteed, waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo loogu talagalay sawirro diyaar ah iyo buugaag midabaynta. Tani waxay ka dhigaysaa dad badan inay doortaan inay tan sameeyaan markay isku dayayaan inay ka baxsadaan dhibaatooyinka maalinlaha ah. Haddii aadan haysan waqti ama xirfad aad ku sameysato mandalas kuu gaar ah, waa kuwan qaar ka mid ah sawirro aad ku daabacan karto kuna rinjiyn karto guriga. Baadhid.
Ma jiraan runtii waxtarro naqshadeynta mandalas?
Haa, mandalas waxaa loo isticmaali jiray qarniyo sidii hab lagu wanaajiyo feejignaanta waxayna leeyihiin faa'iidooyin dhab ah. Taas, rinjiyeynta sawirrada ayaa kaa caawin kara yareynta walaac iyo walbahaar . Sidaas awgeed wax ku kordhinaysa hagaajinta tayada nolosha.
Qodob kale oo wanaagsan oo ku saabsan mandalas waa iyada oo ay ugu wacan tahay eexasho xagga ruuxa ah, waxay caawin weyn u noqon karaan qof kasta oo doonaya iftiin. Kuwa kaliya ee doonaya hiwaayad cusub, waxay u noqon karaan tababar weyn xagga xirfadaha sawiridda iyo rinjiyeynta.